Ihe mere ụmụ Naịjirịa ruru '200' jiri tọọ na Russia - BBC News Ìgbò
Ihe mere ụmụ Naịjirịa ruru '200' jiri tọọ na Russia
14 Julaị 2018
Image copyright Yulia Siluyanova
Otu onye Naịjirịa bi na Rọshịa aha ya bụ Kehinde Oluremi agwala BBC Igbo na aka na-achị Legọs steeti bụ Akinwumi Ambode kwụrụ ụgwọ iji kpọlata ụmụ Naịjirịa 50 tọọrọ na Rụshịa.
Nke a na-eme ka onyeisi ngalaba abụghị nke gọọmentị na-ahụ maka ndị a na-emekpa ahụ akpọrọ Alternativa bụ Yulia Siluyanova gwara BBC na ụlọọrọ na-anọchịte anya Naịjirịa na Rọshịa etinyela ndị Naịjirịa tọọrọ na mba ahụ n'ọlụ ndina.
Cheta na akụkọ pụtara ụnyaahụ na ndị aghụghọ ghọgburu ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa gara Rọshịa maka Iko Mbaụwa n'iresị ha akwụkwọ njem ezụghị ezụ, nke mere ọtụtụ n'ime jiri tọọ na mba ahụ.
Oluremi gwara BBC Igbo na ihe a Siluyanova kwuru bu eziokwu ma gaa n'ihu kwuo na ọ bụ ihe a kpọrọ "Fan IDs" ndị gọọmentị Rọshịa nyere ndị mmadụ iji bata mba ahụ ka aha jiri bịa mba ahụ na nchekube na ha ga-enweta ọrụ maọbụ inweta otu asọmpi.
World Cup 2018: Gịnị ka ndị Naịjirịa chọrọ iji ọkụkọ mee na Rọshịa?
Jersey ndị Super Eagles ị nwere ọ bụ nke ezigbo?
World Cup 2018: Ụmụ Naịjirịa ebee ka a gbaturu ugo Naịjirịa
Kenny kwuru na "Fan ID" a bu ihe mba Rọshịa nyere n'efu, mana ndị mmadụ na-ere ya na Naịjirịa.
O kwukwara na ọbụghị naanị ikiri Iko Mbaụwa ka ụfọdụ mmadụ bịara ime na Rọshịa, makana ọtụtụ chọrọ isi Rọshịa gawa Yurope. Ọ sị na ndị nọ n'ọnọdụ a tọọrọ makana ndị haziri njem ha kagburu akwụkwọ njem ha kwesiri iji lọta.
Oluremi kwuru na ọ bụ otu onye na-arụ ọrụ n'otu ụgbọelu ama ama tinyere ihe karịrị pacent 60 n'ọnọdụ a.
Ndị Naịjirịa ruru 200 nọ bụ n'ọdọ ụgbọelu rue nwanne ụnyaahụ mgbe Alternativa gbalịrị kpọrọ ha gawa ụlọọrụ ndị na-ahụ maka Naịjirịa n'ime abalị.
Siluyanova gwara BBC na ekweghi ka ndị a banye n'ime ụlọ "Embassy" ahụ, mana Oluremi kwuru na ihe mere bụ na ụlọọrụ ahụ emechiela ọrụ mgbe ahụ.
O kwukwara na Sammy Davies bụ onye na-anọchịte anya Naịjirịa na Rọshịa gbara mbọ kasie ụmụafọ Naịjirịa obi, ma kpọrọ ha gawa ụlọ ndịna.
BBC Igbo nwetere otu onye ihe a metụtara n'ekwentị (ọchụghị ka anyị kwuo aha ya) o wee kwuo na ọ bụ eziokwu na etinyere ha n'ụlọ ndina ahụ, ma gwaa n'ihu kwuo na ọ bụ ụgwọ abalị ise ka Davies kwụrụ.
"Akwụụrụ anyị ụgwọ abalị ise, ma kwekwa anyi nkwa na anyị ga-ala, mana anyị amabeghi ihe ga-eme ma oge ahụ gafe," Nwaamadị a kwuru.
Ọ kwukwara na ya nụrụ maka enyemaka gọvanọ Ambode nyere ndị mmadụ, ma sị na ha nwa apuọla n'ọdọ ụgbọelu mgbe nke a mere.
Siluyanova kwuru na ya na ndị otu ya na-ebugara ndị a ihe a metụtara nrị kwa ụbọchị, ma kwuo na mgbe ha kpọtara mmadụ 55 na "Embassy" Naịjirịa, onweghị onye pụtara bịa hụ ha.
"Sọsọ onye anyị hụrụ bụ Kenny (Oluremi Kehinde), sị na ya bụ onye enyemaka. Onweghi onye anyị hụrụ," Siluyanova gwara BBC.
Nkenke aha onyonyo Sammy Davies bụ onye na anọchịte anya Naịjirịa na Rọshịa na ndị Naịjirịa na Rọshịa tata
Ndị na-enweta "Fan ID"
Oluremi gwara anyị na "mgbe anyị ruru ebe a, anyị chọpụta na onye ahụ nara anyị ego tụọrọ anyị asị."
"Fan IDs" a ndị Rọshịa nyere na-enye ndị sị mba ọzọ aka ịbata Rọshịa na-ejịghị akwụkwọ eji aga mba Bekee Kpọrọ "Visa".
Ikike "Fan ID" ga-emebi na ngwụcha Julaị.
A na-enye ndị nkwado otu egwuregwu di icheiche zụrụ akwụkwọ eji ekiri asọmpi Iko Mbaụwa "Fan ID" n'efu.
Mana ndị ọ dị n'aka ha resiri ya ndị Naịjirịa chọrọ ịga Rọshịa ga rụo ọrụ.
Amabeghị etu ndị a jiri nwete "Fan IDs" a ha resịrị ndị mmadụ.
AFP kwuru na otu onye na-arụ ọru n'otu na-ahụ maka egwuregwu bọọlụ n'ụwa niile bụ FIFA kwuru na ọ bụ ngalaba na-ahụ maka mgbasa ozi na Rọshịa nyere akwụkwọ a.
Image copyright Yulia
Nkenke aha onyonyo Gọọmentị Rọshịa ekwuola na ịkpọla ndị tọọrọ dị na-aka gọọmentị Naịjirịa
"FIFA ga na-agbambọ ịhu na-enwetere, ma kagbuo ire akwụkwọ adịgboroja," onye a gwara AFP.
Ndị Naịjirịa tọọrọ
Oluremi kwuru na-ekwesiri ịgba mbọ kpọlata ndị Naịjirịa maka oge atụma oyi na-abịa n'ike, ọkachasị na ọtụtụ ndị a bịara Rọshịa enweghi akwa eji egbochi oyi.
"Biko, ka eme ngwa ngwa kpọọla ndị a maka n'akpachaghị anya, ọ bụrụ ozu ka anyị ga-ebula," Oluremi Kwuru.
Onye ihe a metụtara anyị gbara ajụju ọnụ kwuru na ha chọrọ enyemaka ma rịọ ndị Naịjirịa ka ha echezola ha na Rọshịa.
"Anyị chọro ịlaghachị obodo anyị. Anyị ebeela akwa, mana anyị ahụbeghi etu a ga-esi me ya bụ ihe."
Oluremi na onye anyi gbara ajujụ ọnụ kwuru na ọ bụ otu nwoke a na-akpọ Maxwell na-arụ ọrụ na Turkish Airline bụ onye aka ya kachasị dị na "mpụ" a kpọsara ha na Rọshịa.
BBC Igbo jụrụ ụlọọrụ ụgbọelụ a maka nke a, ha were gwa onye ntaakụkọ a na ha ga-etinye anya na ya.
Turkish Airline sị ka enye ha akara ọgụgụ ndị a tọọrọ. BBC mekwara nke ahụ.
Otu onye Turkish Airline mechara gwa BBC Igbo na akara ọgụgụ bu nke ha, mana na ọgbụghị ha kagburu ya, na nke a si n'aka ndị "agent".
Ha gakwara n'ihu gwa BBC na ha agaghị ịgwa BBC aha "agent" ahụ, ma kwukwa na ha ka na-eme nyocha ma onwere onye aha ya bụ Maxwell n'ụlọọrụ ha na Lagos.
Image copyright Óluremi Kehinde/Facebook
Nkenke aha onyonyo Oluremi Kehinde, bụ onye Naịjirịa bi Rọshịa, na-arịọ ka eme ọsịsọ kpọlọta ndị a tọro na Rọshịa
Onye ọzọ BBC Igbo gbara ajụjụ ọnụ bụ ụkọchukwu Nnamdị Odimegwu na hụ maka uka Christ Embassy na Mosko kwuru na ọ bụ eziokwu na ndị mmadụ bịara ikiri iko mbaụwa tọọrọ maka ndị haziri ha akwukwọ ha ji bịa ghọgburu ha.
Okwuru na ọ bụ arịro ka a na-arịọ ka akpọla ndị a.
"Onwere ndị nọcha na ọdọ ụgbọelu dị icheiche. Otu onye ahu adịghị ka m na-aga ịhụ ugbua," Odimegwu kwuru.
"Ọ bu ndị nọ na Moscow bụ ndị nwere ihu ọmma, ọtụtụ na obodo ndị ọzọ. Anyị na agbali inye aka. Anyi na-enye ha nrị, mana ozughi, makana ọ bụghị ihe anyị ga emeli sọ anyị.
"Ndị nọ Embassy na agbalị, mana aka chọkwara enyemaka," Odimegwu kwuru.
Ngalaba abụghị nke gọọmentị na Rọshịa akpọrọ Alternativa kwuru na ha enyerela ndị Naịjirịa iri ise aka ịlaghachi mba ha, ma sị na ha che na ndị ihe a metụtara ruru mmadụ 200.
"Ohere na ha adịrị ndị mpu na aghụghọ imegide mmadụ na mbaụwa," Yulia Siluyanova, ọnụ na-ekwuru Alternativa kwuru.
Siluyanova gwara AFP na ndị gọọmentị Rọshịa, site n'enyemaka Alternativa na-ahazị ka akpọọla mmadụ 20 n'ime ndị a tọọrọ.
BBC Igbo gbara mbọ inweta ngalaba na-ahụ maka Naịjirịa na Rọshịa n'ekwentị mana ha azaghị oku anyị kpọrọ ha, maọbụ zaghachị email ezigara ha.
Anyi gbakwara mbọ inweta ndị ụlọọru gọọmentị Naịjirịa.
#EkitiElection: A na-ekezi ego n'Ekiti?
Ị ma chi ndị Igbo na-efe n'oge gboo?
Ụmụ Igbo karịrị asatọ sonyere na ndị ọkaiwu SAN
Iko mba uwa FIFA 2018
Otu egwu bọọlụ Naịjirịa
Iko mba ụwa
Ndị Igbo, ndị Bini na ndị Yoroba si otu ebe pụta - Obi Onitsha
Ị ma ntorobia bụ 'ewu akpụkpa ntị'? Lee etu ị ga-esi kwa nku ya
'Onyeisiala Buhari achụghị Tunde Fowler n'ọrụ, ụ bụ oge ya gwụrụ'